🥇 ▷ Dhallintu waxay jecel yihiin iPhone iyo iPad, laakiin ma ahan Apple Watch ✅
Dhallintu waxay jecel yihiin iPhone iyo iPad, laakiin ma ahan Apple Watch
Dhallinta Mareykanka ah ayaa weli jecel iPhone iyo iPad
Warbixinta ugu dambeysa ee xiriirka saaxiibtinimo ee dhalinyarada oo ay daabaceen falanqeeyaha Gene Munster ee Piper Jaffray ayaa keena war aad u wanaagsan Apple iyo mid kale oo laga yaabo inaysan intaas badin.
Lixdii biloodba mar ayuu falanqeeyuhu sameeyaa a Sahamin koox dhalinyaro ah si ay u ogaadaan ujeedooyinkooda dukaameysiga bilaha soo socda. Munaasabadan, sahanka waxaa lagu sameeyay 7,200 dhalinyaro ah oo qiyaastii jira 16 sano waxayna natiijooyinka si cad ay u cadeeyeen in noocaan dadweynuhu doonayo.
Sida laga soo xigtay warbixinta Munster, 67% dhalinyarada waxay leeyihiin iPhone, oo ah tiro ka sareysa sahankii hore ee gaadhay “kaliya” 61%. Intaa waxaa dheer, sahanka ayaa sidoo kale muujinaya in 73% ay yiraahdaan in taleefanka casriga ee ay soo iibsadaan ay noqon doonaan iPhone.
Kiniiniga shirkadda Cupertino waxaan sidoo kale u aragnaa war wanaagsan. Marka loo eego dhallinta yar ee la daraaseeyay, kuwa kiniiniga lahaa, 54% waxay leeyihiin iPad, 1% wax kayar xog aruurintii hore. Marka loo eego kiniiniyada Android, waxaan aragnaa hoos u dhac aad u sii macaan, 25% ilaa 16%.
Apple Watch si fiican uma shaqeynayaan ujeedkuna wax iibsigu wuu yaryahay
19% dhalinyarada da’da yar ee la wareystay waxay qorsheeyeen inay iibsadaan kiniin lixda bilood ee soo socota. Kuwaas, 46% waxay dooran lahaayeen iPad, 14% iPad Mini, oo wada jir u matali lahaa 60%. Android, Dhanka kale, waxay ku jirtaa rabitaanka iibsashada kiniiniyada 16% kuwa xiiseynaya aaladda noocan oo kale ah.
Halka aan ka helnay warar ka sii daraya Apple Watch. Gelmada koowaad ee shirkadda Cupertino waxay umuuqataa inaysan xiiseyneynin dhalinyarada da ‘yarta ah oo keliya 16% waxay yiraahdaan waxay ku talo jiraan inay iibsadaan mustaqbalka dhow, in kasta oo ay sugi laheyd ilaa ay run noqoto in la arko haddii runti guuleysto iyo in kale.
Weli, waa muhiim in la xuso taas sahanka waxaa la sameeyay kahor intuuna Apple soo bandhigin iPhone 6, iPhone 6 Plus iyo  Laftiraha laftiisa, markaa laga yaabee haddii sahaminta lagu celiyo hadda natiijooyinka inay aad u kala duwanaan karaan.
Sikastaba, iyo sida ay yiraahdaan Padgadget, way cadahay arintaas Apple wali waxay leedahay soo jiidasho badan oo ka mid ah dhalinyarada Mareykanka. Dadka dhallin-yarada ah waxay rabaan aalado sumad leh taasina waa wax ay si wanaagsan ugu sameynayaan xafiisyada Apple ee Cupertino. Miyaad u malayn?